नसुनिएका आवाज - Page3of 17 - KHASOKHAS
निर्मलालाई न्याय अराजक भिडले होइन, यही सरकारले दिन्छ – प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मला पन्त र उनको परिवारलाई छिट्टै न्याय दिने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सडकको भिडले नभई आफूले नेतृत्व गरेको सरकारले निर्मला तथा अन्य छोरीचेलीलाई न्याय दिने बताउनुभयो । ‘अन्यायमा परेका वा आपराधिक घटनाका शिकार भएका निर्मला वा अन्य छोरीचेलीलाई सडकमा पोखिने अमर्यादित तथा अराजक भिडले न्याय दिने …
आचार्य समाजद्धारा अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो वितरण
आचार्य बन्धु समाज केन्द्रिय कार्यलय काठमाडौँले सप्तरीका अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानो वितरण गरेको छ । बाक्लो हुस्सुसँगै बढेको शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको बेला आचार्य बन्धु समाजले सप्तरीका विपन्न परिवारलाई न्यानो वितरण गरेको समाजका सचिव विष्णु आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, सप्तरीको कञ्चरीया, खड्क नगरपालिका वडा नम्बर, ३,५ र ६ का गरुडा, कंचिरा, …
शिक्षामा ६ अर्ब वैदेशिक अनुदान किन रोकियो ?
स्थानीय तहबाट शैक्षिक कार्यक्रमका प्रगति विवरण तयार नहुँदा कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता रोकिएको छ । ससर्त अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी)को प्रगति विवरण स्थानीय तहले केन्द्रमा नपठाउँदा सहायता रोकिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । काम सकेपछि मात्रै दाताहरूसँग भुक्तानी लिने गरी सम्झौता भएकोमा प्रगति विवरण नै नआएपछि दाताहरूले …
नेताका, प्रदेशमा पनि छोराछोरी र सालासाली पिए
जुनसुकै पार्टीलाई पनि राजनीति गर्न धेरै भन्दा धेरै कार्यकर्ता चाहिन्छ । कार्यकर्ता धेरै भए पार्टी सशक्त हुन्छ । त्यसैगरी चुनाव जित्न जनताले मतदान गर्नु पर्छ । चुनावको समयमा हरेक पार्टीका कार्यकर्ता जोडबलले आफ्नो पार्टीका नेतालाई जिताउन लागि परेका हुन्छन् । तर निर्वाचन पश्चात ती कार्यकर्ता र मतदातालाई वेवास्ता गर्दै नेताहरुले आफ्नो पिएमा सालासाली, भाइभतिज र …
कतारको सबैभन्दा ठूलो पफ्र्यूम व्यवसायी कसरी बने नेपाली !
नेपालीभन्दै हेप्ने भारतियहरु, अहिले मोम्हमत कहाँ काम माग्न आउँछन । उनको कम्पनिमा उत्पादन हुने पफ्र्यूम पाँच हजारदेखि नेपाली ३ लाख रुपैयाँसम्म पर्दछ । उनले उत्पादन गरेको पफ्यूम नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि कलाकार रेखा थापासम्मले लगाईसकेका छन् । अस्मिता खड्का / सबै नेपाली विदेशमा मजदुरी गर्न मात्र जाँदैनन् । कैयौँ नेपालीहरु विदेशमा आफ्नो व्यावसाय गरेर विदेशीहरुलाई काम समेत दिएका छन् …
मोहनविक्रमका लुगामा जुम्रैजुम्रा भेटेँ
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम (एमबी) सिंह, ६५ वर्षदेखि निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय छन् । एमबीले २९ वैशाख ०५७ मा आफूभन्दा ३७ वर्ष कान्छी दुर्गा पौडेलसँग बिहे गरेपछि पार्टीभित्रै तीव्र विरोध भयो । सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्नेसम्मको बहस भयो । अनमेल विवाह भनेर विरोध गर्नेहरूको पार्टीमा बहुमत पुगेपछि एमबीले बरु महामन्त्रीबाट राजीनामा दिए, दाम्पत्य जीवनलाई जोगाइराखे । अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी दुर्गा …
सन्तोषी अधिकारी /बिरामीको उपचार गरेपछि डाक्टरले लेख्ने प्रेस्क्रिप्सनमा औषधीलगायत सबै कुरा स्पष्ट बुझिने गरी लेख्नुपर्ने भएको छ । प्रेस्क्रिप्सन नबुझिएका कारण गलत औषधि सेवन गरेर बिरामी समस्यामा परेको गुनासो आएपछि मेडिकल काउन्सिलले अक्षर बुझिने लेख्न डाक्टरहरुलाई चेतावनी दिएको छ । कसैले अक्षर नबुझिने लेख्यो भने टिप्पणी गर्दै भनिन्छ ‘कस्तो डाक्टरी अक्षर हो’ । अझै पनि …
हड्डीको योजनाले भौतिक संरचना राम्रो बन्दैन, इन्जिनियरिङको ब्यूटिनेस बुझौँ !
इन्जिनियर तथा व्यावसायी दिपक पराजुली / प्रकृति सुन्दरता आफ्नो ठाउँमा छदैछ ।, तर झ्ट हेर्दा, देशको मुहार चट् देखाउने भौतिक पूर्वाधार पनि हो । बनेका र बनाउँदै गरेका संरचनाको सुन्दर समायोजन पनि हो । एउटा सानो उदाहरण, वा तपाईले पनि अनुभव गर्नु भएको होला, विदेश घुम्न जाँदा हाम्रो मन र आँखा लोभ्याउने भनेको त्यहाँको भौतिक …
गैरजिम्मेवार सरकार भन्दै नेता रावल बैठकमा कड्कीए !
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेता रावलले आयोजना विकास सम्झौता अनुसार भारतीय कम्पनी जिएमआरले सो आयोजनाको काम अघि नबढाउँदा पनि कुनै कदम चाल्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना समते गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै …
आफैलाई सोध्नै पर्ने प्रश्न ?
हामी जिवनमा नयाँ काम गर्ने सोच बनाउँछौँ तर, त्यो काम किन गर्दैछौ भन्ने कुरा आफैलाई प्रष्टसँग सोध्यैनौँ, अनि परिणाम गलत निस्कन्छ । परिणाम गलत निस्कियो भने सजिलै दोस भाग्यलाई दिन्छौँ र भाग्छौँ । काम सुरु गर्नुपूर्व आफूलाई सोध्नै पर्ने पहिलो प्रश्न, म यो काम किन गर्दैछु ? यदि तपाई आफूसँग यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु भयो …